Fepetra ilaina 3 ilaina amin'ny fampiharana Internet | Martech Zone
Mihamaro hatrany, hitako fa manontany ireo mpivarotra sy orinasa ireo fanontaniana ireo hatrany hatrany aho. Raha mieritreritra ny hampivelatra ny rindranasao manokana ianao, ireto dia fiasa 3 tokony hampidirina manomboka amin'ny andro voalohany ao amin'ny fangatahanao raha te hitahiry loharano ianao any aoriana.
Moa ve ny fangatahanao…
Have a API? Tsy mila manokana na serivisy amin'ny tranokala… misy ol 'XML tsotra izay hanao. Izahay dia te hampiditra azy ao anaty ny rindranay andro vitsivitsy hanamboarana automatique ary hanamora ny fitantanana ny mpanjifanay manana teknolojia maro. Raha hanomboka fangatahana androany aho dia miasa amin'ny API mivoaka, manahy momba ny Interface an'ny mpampiasa aorian'ny… angamba ny fampiraisana ny UI amin'ny alàlan'ny API hahazoana antoka fa nanangana azy tsara izahay.
Manaova toetran'ny maso misafidy? Tianay ny mivarotra ny mpanjifanay amin'ny rindranasao, saingy tianay ny afaka mitantana izany ho azy ireo. Ity misy ohatra iray: maninona no tsy manana Kaonty Agence izay ahafahan'ny mpanjifa mitazona ny fananany ilay mpanjifa, fa ny Agence kosa afaka mitantana… ary mandoa… aza amin'ny fisoratana anarana? Nanoratra ny fisoratana anarana aho izao hariva izao ary nanoro hevitra an'io.
Manana Feature Enterprise? Mihamaro ny orinasa dia fanangonana kely fotsiny. Ny tatitra dia tokony hitambatra amin'ny ambaratonga maro toy ny fikambanana. Filohan'ny Diviziona VP mankany amin'ny Mpitantana isam-paritra kaonty… ny tsirairay dia tokony hanana alalana hidirana ary koa ny tatitra famintinana amin'ny ambaratonga rehetra eo anelanelany.
Ny fepetra mahazatra amin'ny fanaovana tena izy dia ilainao ary koa ny fepetra fiarovana dia mihatra foana; na izany aza, ireo takiana voalaza etsy ambony dia matetika no odian-tsy jerena na apetraka amin'ny backlog hamboarina any aoriana. Manangona vovoka amin'ny backlog izy ireo, toy ny rindrambaiko an'ny orinasa.
Raha orinasa Venture Capitalist famatsiam-bola amin'ny tontolon'ny Web 2+ aho, dia izao no tena ilaina. Raha tsy manamboatra ireo endri-javatra ireo ianao farafaharatsiny, mino aho fa hitondra ny volako any an-kafa. Raha prospect aho dia matetika no manao izany.
Tags: fehezan-dalànasary infografikamahita ny influencersendritsoratraGoogle +iframebreaker iframemodely ho an'ny tetikasaprwebWordpress login
Inona ny LinkedIn?
Jul 2, 2008 amin'ny 8: 46 AM
Mahafinaritra ny hevitrao momba ny fisehon'ny maso ivoho ho an'ny fisoratana anarana. Izany indrindra no ilaiko amin'ny iray amin'ireo tetikasako.
Jul 2, 2008 amin'ny 9: 48 AM
Tena tiako ny Feature Agency. Manana domains iray taonina aho ary tiako ho fantatra fa ny tena sehatr'asa dia voasoratra anarana amin'ny anaran'ny mpanjifako kanefa mbola afaka manana fifehezana 100% amin'ny fitantanana ny sehatra ho azy ireo aho. Heveriko fa ho tian'ny mpanjifa izany ary manala ny tahotra sao misy mpanolo-tsaina manery azy ireo amin'ny anarany manokana raha manjary ratsy ny fifandraisana misy eo amin'izy ireo.
2 Jul 2008 amin'ny 9:58 PM
100% dia miombon-kevitra aminao Doug, momba ny API. endri-javatra sy maso ivoho… Hevitra Excel !. Mpangataka amin'ny Internet = Ho avy